सिम्रिक एयरको नयाँ हेलिकोप्टर | गृहपृष्ठ
Home बजार सिम्रिक एयरको नयाँ हेलिकोप्टर
सिम्रिक एयरको नयाँ हेलिकोप्टर
साउन ३०, काठमाडौं (अस)। निजीक्षेत्रको हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी सिम्रिक एयरले नयाँ हेलिकोप्टर थप गरेको छ । अत्याधुनिक प्रविधिको ‘इक्युरियल एएस-३५० बी ३ प्लस’ नामको ६ सिटे हेलिकोप्टर थप गरेको सिम्रिक एयरका महाप्रबन्धक योगराज कँडेल शर्माले जानकारी दिए । उक्त हेलिकोप्टर फ्रान्सको यूरोकप्टर कम्पनीले निर्माण गरेको हो । अत्याधुनिक प्रविधिबाट निर्मित यो हेलिकोप्टर सबैभन्दा अग्लो उचाइमा उडान गर्न सक्ने क्षमता भएको शर्माले बताए । यो हेलिकोप्टर अहिलेसम्म नेपालमा भित्रिएकामध्ये सबैभन्दा नयाँ मोडलको भएको उनको दाबी छ । २०११ को जनवरीमा निर्माण भएको यो हेलिकोप्टरको १ हजार ४ सय किलोसम्म सामान बोक्न सक्ने क्षमता रहेको छ । नयाँ हेलिकोप्टरले अगष्ट २२ देखि उडान भर्ने सोमवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
नयाँ हेलिकोप्टरमार्फत पर्वतीय उडानका साथै उद्धार र धार्मिक पर्यटनका गन्तव्यमा सेवा दिने शर्माले बताए । धार्मिक पर्यटनका गन्तव्य मानिएका कैलाश मानसरोवर (हिल्सा), मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, लुम्बिनी, पाथीभरा, हलेसी, खप्तड, बडीमालिकालगायत क्षेत्रमा उडान भर्नका लागि यस हेलिकोप्टरको प्रयोग हुने सिम्रिक एयरले बताएको छ ।
सिम्रिकले सन् २०१२ भित्र दुईओटा हेलिकोप्टर थप गर्ने भएको छ । सन् २०१२ को पहिलो महीनामा एक र जुलाईमा अर्को एक जहज थप गर्न सिम्रिकले यूरोकप्टर साउथ इष्ट एशियासँग सम्झौता गरिसकेको बताएको छ ।
विसं २०५८ मा स्थापना भएको यस एयरले एमआई १७ नामको ठूलो हेलिकोप्टरबाट सेवा सञ्चालन गरेको थियो । हाल यसले बीके-११७ बी २ नामका दुईओटा नौसिटे जापानिज हेलिकोप्टर सञ्चालन गरिरहेको छ । नयाँ ६ सिटे जहाज थपसँगै सिम्रिकको हेलिकोप्टर तीनओटा पुगेका छन् । २५ लाख अमेरिकी डलरमा खरीद गरेको नयाँ हेलिकोप्टरको प्रतिघण्टा चार्टर उडान २५ सय अमेरीकी डलर तोकिएको छ । सिम्रिकले सामान्य अवस्थाका उडानमा २० प्रतिशत छूट दिएको छ भने आगामी सेप्टेम्बर १० सम्मका लागि भने ४० प्रतिशत छूट दिएको बताएको छ
तनहुँको होटल व्यवसायमा साढे सात करोड नयाँ लगानी
साउन ३०, दमौली । तनहुँ जिल्लाको होटल व्यवसायमा आर्थिक वर्ष२०६७/६८ मा रू. ७ करोड ५० लाखभन्दा बढी लगानी भित्रिएको छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घ तनहुँका अनुसार जिल्लामा उक्त आवमा मझौला तथा ठूला गरी १५ नयाँ होटल स्ाञ्चालनमा आएका छन् । यसमध्ये ठूला लगानीका होटल सात र अन्य मध्यमस्तरका लगानीका रहेका सङ्घका अध्यक्ष सन्तोषकुमार श्रेष्ठले अभियानलाई बताए ।
नयाँ स्थापना हुने होटलहरूमा राजमार्ग क्षेत्रमा १० रहेका छन् । तीमध्ये दुईमा ५० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएको उनले बताए । राजमार्ग क्षेत्रमा पर्यटकका लागि लक्षित गरी दुई ठूला लगानीका होटल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने अर्को एक निर्माणको क्रममा रहेको छ । डुम्रे नजिकै राजमार्ग क्षेत्रमा ‘कोको हाइवे होटल’ सञ्चालनमा आइसकेको छ । सो होटलमा ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको बताइएको छ । र्याफ्टिङका लागि दमौली आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी दमौलीनजिकै ‘दमौली रिभर भ्यू’ होटलको निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, राजमार्ग आसपासका आबुखैरेनी, विमलनगर, सत्रसय, बरादी, नहाला, डुम्रे, दुलेगौंडालगायत क्षेत्रमा १० नयाँ होटल यसै वर्षसञ्चालनमा आएका छन् । यी होटलमा १५ देखि ४० लाखको हाराहारीमा लगानी रहेको जानकारी दिइएको छ ।
उक्त आवमा तनहुँको बन्दीपुर बजारमा पनि ठूला लगानीका दुई नयाँ होटल सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसमध्ये नयाँ भवनसहित सेवा विस्तार गरेको वर्ल्ड इनमा रू. १ करोड ५० लाखभन्दा बढीको लगानी भएको होटलका प्रबन्धक रामशरण श्रेष्ठले बताए । बेलायती नागरिकको लगानी रहेको सो होटलमा यसअघि पनि १ करोड ५० लाख लगानी भइसकेको उनले बताए । यस्तै सोही ठाउँमा ‘टेण्टेड क्याम्प’ नामक होटल पनि जर्मनी नागरिकको लगानीमा सञ्चालित छ ।
पृथ्वीराजमार्गले अधिक क्षेत्र ओगटेको तनहुँमा आवश्यक पूर्वाधारलगायत अन्य सेवा सुविधाको उपलब्धता तथा नियमित बस रोक्ने स्टेशन भएकाले होटलहरूको स्थापना क्रम बढेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै, केही वर्षयतापर्यटकीय नगरी बन्दीपुरलगायत जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बढेको पर्यटकीय चहलपहलका कारण होटल व्यवसायमा लगानीकर्ता थपिएको उनी बताउँछन् । ‘यदि बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रम नहुने हो भने तनहुँमा होटल व्यवसाय विकासको सम्भावना धेरै छ,’ उनले भने । जिल्लामा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सकिएमा होटलसँगै अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी व्यवसायी भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
भारतीय दूतावासद्वारा २० एम्बुलेन्स सहयोग
भारतले आफ्नो ६५ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालका १७ जिल्लाका विभिन्न अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई २० ओटा एम्बुलेन्स र ४ ओटा बस उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ । सोमवार नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास परिसरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा कार्यबाहक राजदूत जयदीप मजुम्दारले १७ जिल्लाका संस्थाहरूलाई १५ ओटा एम्बुलेन्स र ३ ओटा बस प्रदान गरे । बाँकी एम्बुलेन्स तथा बसहरू वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत आशुतोष अग्रवालले वीरगञ्ज महावाणिज्यदूतावासको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने संस्थाहरूलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरे ।
उक्त अवसरमा कार्यबाहक राजदूतले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराई १४ अगष्टमा राष्ट्रका नाममा भारतका राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश पढेर सुनाएका थिए । सोही अवसरमा उनले नेपालका केही दुर्गम जिल्लालगायत विभिन्न स्थानमा रहेका ५० शैक्षिक तथा तालीम संस्थानहरूलाई पुस्तकसमेत उपहार प्रदान गरेका थिए ।
भिबोरको मर्जर प्रस्ताव अनुमोदन
साउन ३०, काठमाडौं । भिबोर विकास बैङ्कको विशेष साधारणसभाले मर्जरको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । बैङ्कको सोमवार बसेको विशेष साधारणसभाले भाजुरत्न फाइनान्स एण्ड सेभिङ कम्पनीसँग मर्ज हुने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले अन्य उपयुक्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान आवश्यक कार्य गर्नसमेत सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ । सभाले यसका लागि मर्जर समिति गठनको अधिकारसमेत सञ्चालक समितिमा प्रत्यायोजन गरेको बैङ्कले बताएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बैङ्कले बैङ्कको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन तथा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्न, मर्जर सम्झौता गर्न तथा प्रक्रियाअघि बढाएर शीघ्र मर्ज गने अख्तियारीसमेत सञ्चालक समितिलाई दिएको बताएको छ । त्यस्तै, भिबोर परिवर्तीय शेयर निक्षेप योजना सञ्चालन गर्न तथा शेयर संरचना ६१:३९ बनाउन सर्वसाधारण समूहतर्फ हकप्रद शेयर जारी गर्ने अनुमति पनि साधारणसभाले दिएको छ । भिबोरले गत महीना भाजुरत्न फाइनान्ससँग मर्ज हुने घोषणा गरेको थियो ।
रियल टूरको दोस्रो विजेता
रियल जुसले ल्याएको ‘रियल क्वालिटी टूर कण्टेष्ट’ योजनाको दोस्रो साताको विजेता घोषणा गरिएको छ । साउन २३ देखि २९ गतेसम्मको सातामा प्रेम अधिकारी (मोबाइल न.९८४२६२७०२९) विजयी भएका छन् । उनी सबैभन्दा बढी सही उत्तर भएको एसएमएस पर्ठाई विजयी भएका हुन् । १२ हप्तासम्म सञ्चालन हुने यस टूर कण्टेष्टका विजयी ग्राहकलाई सिमरा स्थित डाबर रियल प\_mयाक्ट्री र पोखराको ३ दिन २ रातको क्वालिटी टूरमा लगिने रियल जुसको उत्पादक डाबर नेपालले बताएको छ । यस योजनाको अन्त्यमा सुपर बम्पर पुरस्कारअन्तर्गत दुई जोडीलाई सिङ्गापुरको क्वालिटी टूर गराइनेछ । उक्त टूरमा विजेताले आफूले चाहेको अर्को एक जनालाई साथमा लैजान पाउनेछन् । सो भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले बेहोर्ने जानकारी दिइएको छ ।
यामाहाको ‘कुल ड्राइभ अफर’ विजेता छनोट
नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता मोरङ अटो वर्क्स इण्टरप्राइजेज प्रालिले ल्याएको ‘कुल ड्राइभ अफर’ योजनाको विजेता घोषणा गरिएको छ । उक्त योजनाको प्रथम पुरस्कार बानेश्वर, काठमाडौंका अर्जुन राउतले जितेका छन् । उनले आफूले खरीद गरेको यामाहा ‘एफजेड एस’ मोटरसाइकलको पूरा मूल्य फिर्ता पाएका हुन् ।
त्यस्तै, सोही योजनाअन्तर्गत अनारमणि बिर्तामोडका देवीप्रसाद उप्रेतीले द्वितीय र बुटवलका वेदनाथप्रसाद गुप्ताले तृतीय पुरस्कार प्राप्त गरे । उनीहरूले आफूले खरीद गरेको मोटरसाइकलको मूल्यको क्रमश: ५० र २५ प्रतिशत रकम फिर्ता पाए । ग्य्राण्ड होटल, काठमाडौंमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा ‘लक्की ड्र’मार्फत विजेताहरू छनोट गरिएको थियो । कार्यक्रममा मोरङ अटो वर्क्सका बजार प्रमुख रौनक अग्रवाल, बजार विकास व्यवस्थापक सुरज मानन्धर तथा उपाध्यक्ष तथा बिजनेश प्रमुख प्रशान्त कुमारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यस योजनामा यामाहाका आर-१५ र एफजेड सिरिजका मोटरसाइकललाई समावेश गरिएको थियो । यी मोटरसाइकलको खरीदमा तत्कालै यामाहा ब्याग, बाइक कभर, ज्याकेट, हेल्मेट, ग्लोबलगायत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । योजना अवधिभर यामाहाका मोटरसाइकल खरीद गर्ने ३ सय २२ ग्राहकलाई लक्की ड्रमा सहभागी गराइएको कम्पनीले बताएको छ ।
क्याम्पस प्रमुखहरूको अन्तरक्रिया
डियरवाक इन्षिटच्युट अफ टेक्नोलोजीको आयोजनामा दश जोड दुई (+२) अध्यापन गराउने कलेजका प्रिन्सिपलहरूबीच ‘सूचना प्रविधिको अवसर तथा चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रियामा काठमाडौंमा रहेका प्रतिष्ठित दश जोड दुई कलेजका प्रिन्सिपल तथा कार्यक्रम संयोजकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त अवसरमा होटेल एशोसिएशन नेपालका राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, जेभियर एकेडेमीका सुरेन्द्र शर्मा, ≈वाइट हाउस कलेजका राजीवकुमार सिंह, प्राइम कलेजका डिल्लीप्रसाद शर्मालगायतले शीपसहितको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फअबको शिक्षा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए । उक्त अवसरमा डियरवाकका क्याम्पस प्रमुख सुरेन्द्र अधिकारीले सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै व्यावहारिक शीप दिलाउन डियरवाक इन्षिटच्युटको स्थापना गरिएको बताए ।
डियरवाक इन्षिटच्युट नेपाली उद्यमीहरूद्वारा अमेरिकामा स्थापित डियरवाक इन्कर्पोरेशनसँगको सहकार्यमा नेपालमा स्थापित कम्पनी हो । डियरवाक इन्षिटच्युटसँगको सहकार्यमा काठमाडौंको सिफलमा डीडब्ल्यू आईटी कलेज सञ्चालनमा आएको हो । कलेजले यसै शैक्षिक सत्रदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा स्नातक तहमा बीएससी कम्प्युटर साइन्स तथा इन्फरमेशन टेक्नोलोजी अध्यपन कार्यक्रम शुरू गर्दैछ ।
एनएमबीको नाफा ४७ प्रतिशतले बढयो
एनएमबी बैङ्क लिमिटेडले आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को चौथो त्रैमाससम्ममा रू. ३३ करोड २४ लाख सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त नाफा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४७ दशमलव १० प्रतिशतले बढी भएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । बैङ्कले आफ्नो अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
उक्त अवधिमा बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन २७ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १२ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, कर्जा लगानी ४३ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ३४ करोड पुगेको बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । सोही अवधिमा बैङ्कको कर्जा/निक्षेप अनुपात ७७ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको र यसले वासलातको दुवै पक्षमा सन्तुलित वृद्धि गर्न बैङ्क सक्षम भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैङ्कको पूँजीकोष अनुपात १७ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षजारी गरिएको हकप्रद शेयरमार्फत बैङ्कले आफ्नो चुक्ता पूँजीलाई २ अर्ब पुर्याएको छ । हाल बैङ्कको देशभर १८ शाखा र १३ एटीएम छन् ।
जनता बैङ्कको तीज उपहार
जनता बैङ्क नेपाल लिमिटेडले तीजको अवसरमा ‘तीज विशेष उपहार योजना’ ल्याएको छ । बैङ्कले सञ्चालन गर्दै आएको ‘स्मार्ट लेडी बचत खाता’मा खाता खोलेका नारीहरूमा लागू हुने उक्त उपहार योजनाअन्तर्गत चुरा पोते, टीकालगायत वस्तुहरू प्रदान गरिने बैङ्कले बताएको छ । त्यस्तै, उनीहरूलाई एटीएम कार्ड, चेक बूक तथा इण्टरनेट बैङ्किङ सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै लकर सुविधामा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिने जानकारी दिइएको छ । यस उपहार योजना बैङ्कको मुख्य कार्यालय शङ्खमूल, नयाँ बानेश्वर र न्यूरोड तथा सूर्यविनायकबाट उपलब्ध हुने बैङ्कले बताएको छ । सो उपहार योजनामा सहभागी हुन चाहने महिलाहरूले ती कार्यालयहरूमा सम्पर्कराख्नुपर्ने बताइएको छ ।
बैङ्कले हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँबानेश्वर, न्यूरोड र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा शाखा स्थापना गरेको छ । त्यस्तै, उपत्यकाबाहिर पोखरा, धुञ्चे, वीरगञ्ज, चौतारा, ताप्लेजुङ, गौर, बिर्तामोड, इनरुवा, विराटनगर र बुटवलमा शाखा सञ्चालनमा ल्याइसेको छ । निकट भविष्यमै उपत्यकाका कुमारीपाटी, कलङ्की र बालाजुमा शाखा स्थापना गर्ने बैङ्कले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
सिभिकका तीन शाखा
धादिङकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सिभिक डेभलपमेण्ट बैङ्कले चालू आवमा तीनओटा शाखा तथा एक्ष्टेनशन काउण्टर स्थापना गर्ने भएको छ । बैङ्कले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस्तो जानकारी दिएको हो । २०६६ साउन २९ गते स्थापना भएको सिभिक डेभलपमेण्ट बैङ्क आइतवारदेखि तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैङ्कले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा वृक्षरोपणलगायत विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा बैङ्कले धादिङस्थित सुगमटोलको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गरेको छ । बैङ्कका संस्थापक शेयरधनीलगायत जिल्लाका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सहभागितामा उक्त स्थलमा १ सय ५० बिरुवा रोपिएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, बैङ्कले सागरघाटमा टयुबवेल जडान गरेको छ । धादिङबेँशी तथा वरपरका गाविसका मानिसहरूको अन्तिम संस्कार गरिने उक्त घाटमा जडान गरिएको टयुबवेलको बैङ्कका अध्यक्ष नारायणकुमार श्रेष्ठले उद्घाटन गरे । उक्त अवसरमा उनले वर्तमान बैङ्किङ प्रतिस्पर्धामा सामाजिक बजारीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी स्थानीय जनताहरूसँग हातेमालो गर्दै बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै जाने बताए ।
आव २०६७/०६८ मा बैङ्कले रू. १ लाख ७० हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा रू. ७ करोड ७४ लाख निक्षेप सङ्कलन तथा रू. ४ करोड ७६ लाख कर्जा प्रवाह गरेको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । हालसम्म बैङ्कको रू. ४ करोड ९३ लाख कर्जा असुली गर्न बाँकी रहेको र आव २०६७/६८ को अन्तमा कुनै पनि भाका नाघेको कर्जा नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरसँगै बैङ्कले आगामी दिनमा अझ बढी बैङ्किङ सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने प्रबन्धक सञ्जय श्रेष्ठले बताए ।
पूणिर्माको एक्ष्टेन्शन काउण्टर
भैरहवामा प्रधान कार्यालय रहेको पूणिर्मा विकास बैङ्कले रूपन्देहीको सूर्यपुरामा एक्ष्टेन्शन काउण्टर स्थापना गरी वित्तीय कारोबार शुरू गरेको छ । बैङ्कका अध्यक्ष राजुनारायण श्रेष्ठले उक्त काउण्टरको उद्घाटन गरे । बैङ्किङ पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा शाखा स्थापना गर्ने बैङ्कको नीतिअनुसार उक्त काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको बैङ्कले बताएको छ । बैङ्कले दुई हप्ताअघि रूपन्देहीकै धकधईमा एक्ष्टेन्शन काउण्टर स्थापना गरेको थियो ।
उक्त अवसरमा बैङ्कका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले बैङ्कको वित्तीय विवरणबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म रू. १ करोड ३ लाख सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा बैङ्कले रू. ५२ करोड ९५ लाख निक्षेप सङ्कलन तथा रू. ३६ करोड ५८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको थियो । काउण्टर सञ्चालनमा आएको पहिलो दिन ४ सय जनाले खाता खोलेको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । चुक्ता पूँजी १० करोड रहेको बैङ्कको बुटवल, भलवारी, ड्राइभर टोल र परासीमा शाखा रहेको छ । काउण्टर उद्घाटनका अवससरमा बैङ्कका सञ्चालक नारायणप्रसाद अग्रवाल, सूर्यपुरा काउण्टरका इञ्चार्ज पोमराज रेग्मी, स्थानीय समाजसेवी टीकाराम रिजाल, इलाका प्रहरी कार्यालय सूर्यपुराका प्रमुख सहायक प्रहरी निरीक्षक चोपनारायण खनाललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सेवाको शाखा डण्डा बजारमा
सेवा विकास बैङ्कले नवलपरासीको डण्डा बजारमा शाखा स्थापना गरेको छ । यससँगै सेवा विकासका शाखा नौ पुगेका छन् । सोमवार अयोजित कार्यक्रमबीच बैङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीमप्रसाद तुलाचनले उक्त शाखाको उद्घाटन गरे ।
उक्त अवसरमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशप्रसाद काफ्लेले बैङ्कले आव २०६७/६८ मा रू. ३ करोड ८८ लाख नाफा आर्जन गरेको बताए । उक्त अवधिमा बैङ्कले रू. १ अर्ब ३३ करोड २३ लाख निक्षेप सङ्कलन तथा १ अर्ब १ करोड २१ लाख कर्जा प्रवाह गरेको उनले जानकारी दिए । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सेवा विकास बैङ्कले आफ्ना आठओटा शाखामार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शाखा उद्घाटनको अवसरमा ५ सयभन्दा बढीले खाता खोलेको बैङ्कका सहायक महाप्रबन्ध हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।
कागज उद्योगलाई अनुदान
साउन ३० बेनी (अस) । म्याग्दीको रुम गाविस ९ अदिभारामा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, उद्यमी र उपभोक्ताहरूद्वारा सञ्चालित सोले हब्व कागज उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला वन कार्यालयले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । जिल्ला वन अनुगमन समितिको उद्योग सञ्चालनका लागि टहरा निर्माण गर्न कार्यालयबाट ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र थप सहयोगका लागि जिल्ला विकास समिति, म्याग्दीलाई अनुरोध गर्ने जिल्ला वन अधिकृत पूर्णोश्वर सुवेदीले जानकारी दिए ।
यसैबीच देविस्थान गाविसको थापाचौरमा रहेको अल्लो प्रशोधन तथा साझा सुविधा केन्द्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र वैधानिक बनाउन वन कार्यालयले सहयोग गर्ने भएको छ । जिल्ला वन अनुगमन समितिको टोलीले गैरकाष्ठ वनपैदावारबाट सञ्चालित ती उद्योगको अवस्थाबारे शुक्रवार अनुगमन गरेको थियो ।